feed mixer စက်စျေးနှုန်းနှစ်ဆရိုးဖဲကြိုး feed ကိုရောနှောစက်
စွမ်းရည်:500-30000 ကီလိုဂရမ် / နာရီ
နှစ်ချက်ရိုးလှော်အစာကျွေးခြင်းရောနှောပိုမိုအသုံးပြုသည် တိရိစ္ဆာန်အစာစက်ရုံ အကြောင်းဖြစ်သော၎င်း၏တိုတောင်းတဲ့ရောစပ်အချိန်၏ 30-120 အသုတ်နှုန်းစက္ကန့်နှင့်ပိုပြီးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအရောအနှော. ရောစပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအစာကျွေးမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းရောစပ်မှုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်, အဓိကကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်းအမှုန့်များကဲ့သို့သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုရောနှောနိုင်သည်,ဗီတာမင်,အမိုင်နိုအက်ဆစ်,တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကောင်းစွာဒြပ်စင်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး,ကြက်သား,နွားမ,ဆိတ်သငယ်,ကောင်းသော heath.double ရိုးတံလှော် feed ကိုရောစပ်စက်နှင့်အတူဝက်ကြီးထွား, ထို့အပြင် Horizontal Non- ဆွဲငင်အားရောနှောဟုခေါ်တွင်, ကမြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူအဆင့်မြင့်ရောစပ်စက်ဖြစ်ပါတယ်, မြင့်မားသောညီမျှမှု, မြင့်မားသောပြင်းထန်မှု, စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပြီးလေထုညစ်ညမ်းမှုနည်းသည်. feed blender စက်သည်အမှုန့်အမှုန့်နှင့်အမှုန့် - granule ကိုရောနှောရာတွင်အသုံးပြုသည်,အရာအထူးသဖြင့်ဆွဲငင်အားသို့မဟုတ်အမှုန်အရွယ်အစားအတွက်ကြီးမားသောခြားနားချက်နှင့်အတူပစ္စည်းများအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည်။ နှစ်ဆရိုးတံရောစပ်စက်ကျယ်ပြန့်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာအဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။, အစာ, ဓာတု, ဓာတ်မြေသြဇာစသည်တို့.
Double shaft paddle feed blending machine သည်သေးငယ်သောရောနှောပါဝင်သည့်အရာများနှင့်မြင့်မားသောရောစပ်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုသဘောပေါက်သည်. နှစ်ဆရိုးလှော်အစာကျွေးစက်ရောနှောစက်တွင်ရောစပ်ချိန်ရှိသည်, ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်။, မှ 30 ရန် 120 စက္ကန့်ပိုင်း. အဆိုပါအစာရောနှောစက်မှစွမ်းရည်နှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည် 250-3000 အသုတ်နှုန်းကီလိုဂရမ်. ရောစပ်ခြင်းတိကျမှုသည်အလွန်တင်းကြပ်သောလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်, ထုတ်ကုန်များပျက်စီးခြင်းကိုတားဆီးနေစဉ်အပိုဗုံးတံခါးများကြောင့်ဖြစ်သည်. ဤသည်ကျန်ရှိနေသောနှင့်ဖုန်မှုန့်အခမဲ့ဒီဇိုင်းကိုသေချာ, ထူးခြားသောတံဆိပ်ခတ်နိယာမကြောင့်ဖြစ်သည်. ဤအစာရှောင်ခြင်းရောစပ်နိယာမ၏အောင်မြင်မှုသည် fluidized zone ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်, အရာအတွက်မှုန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်. ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အလေးချိန်မရှိသောအခြေအနေတွင်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းကိုရောနှောနိုင်ကြသည်။ ဤနှစ်ဆသောအစာကျွေးခြင်းရောစပ်စက်သည်ခြောက်သွေ့သောမှုန့်များနှင့်အမှုန့်များရောစပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏အမြောက်အများသိပ်သည်းဆသို့မဟုတ်ပုံသဏ္pectiveာန်ပေါ် မူတည်၍ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။. ရောစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအရည်များကိုထည့်နိုင်သည်.
ဘယ်လိုဒီ feed ကိုရောနှောစက်အလုပ်?
အစာကျွေးခြင်းရောနှောစက်၌တည်၏, ရိုးရိုးနှစ်ခုဖြင့်အငွေ့နှစ်ပြားပါသောဓါးသွားပုံစံများတပ်ထားသည်။ နှစ်ခုရိုးတံများသည်ဆန့်ကျင်ဘက် ဦး တည်ရာတိကျသောအရံအရှိန်ဖြင့်လှည့်သည်။.
၎င်းသည်ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးအားအလယ်တွင် ထား၍ မတူညီသောပါဝင်ပစ္စည်းများအမှုန်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောမြေထုဆွဲအားအားအားလျော့စေခြင်းဖြင့်စီးဆင်းနေသောဇုန်ကိုဖန်တီးပေးသည်။,အရွယ်အစားနှင့် density.Hence,အလွန်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းထုတ်ကုန် received.The လာမယ့်ခြေလှမ်းသည်ဤ segregation.For မပါဘဲရောနှောဖွဲ့စည်းရန်အလွန်အမင်းတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းပစ္စည်းကိုထုတ်လွှင့်ရန်ဖြစ်ပါသည်, pneumatically operated ကြီးမားသောအောက်ခြေရိက်ခာတံခါးများ၏အကူအညီဖြင့်ပစ္စည်းများအလွန်လျှင်မြန်စွာဆေးကြောနိုင်သည်.
double shaft လှော် feed ကိုရောနှောစက်၏အားသာချက်များ
1.ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်, အဆိုပါရောစပ်အချိန်တိုတောင်းသည်, နှင့်တန်ချိန်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသေးငယ်သည်.
2.နှစ်ထပ်ရိုးလှော် feed ကိုရောနှောစက်မြင့်မားသောရောနှောတူညီနေပါတယ်, အပြောင်းအလဲ CV ၏ကိန်း<= 5%.
4.ဒီအရောအနှောရောနှောစက်တွင်အရည်ဖြည့်ထည့်သည့်စနစ်တပ်ဆင်ထားသည်, ၎င်းသည်အရည်အမျိုးမျိုးထည့်နိုင်သည် (ရေ, အမဲဆီ, နှင့်ချို).
5.ကနေအပြည့်အဝကိန်း variable ကိုအကွာအဝေးဖြည့် 40%-140%.
9.ဒါဟာကျယ်ပြန့် feed ကိုအတွက်အသုံးပြုသည်, ထို့အပြင်, ဓာတု, ဆေးဝါး, ပိုးသတ်ဆေး, ဆိုးဆေးနှင့်အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းများ.
10. ဒီအရောအနှောရောနှောစက်တွင်မြင့်မားသောမြန်နှုန်းကိုရောစပ်။ တိုတောင်းသောရောစပ်ခြင်းသံသရာရှိသည်.
မော်ဒယ် SSHJ0.5 SSHJ1 SSHJ2 SSHJ4 SSHJ6
Volume ကို(m3) 0.5 124 6
စွမ်းရည်(ကီလိုဂရမ် / အသုတ်) 250 500 1000 2000 3000
အဓိကပါဝါ(kw) 5.5 11 18.5 30 45
အချိန် / အသုတ်ရောစပ်(s) 30-120 30-120 30-120 30-120 30-120